Kugwetshwe abadlwenguli eKZN | News24
Durban - Emasontweni amabili edlule, bangu-16 abantu ababoshiwe belahlwa ngamacala okudlwengula, kusho umbiko wamaphoyisa KwaZulu-Natal.
Ababoshiwe bebeyingxenye yabantu abangu-173 ababoshelwa amacala okudlwengula, kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Thulani Zwane.
Abagwetshiwe bebevele ezinkantolo ezahlukene esifundazweni, bathole isigwebo seminyaka engu-103, sihlanganisiwe.
Oyedwa kulaba uthole udilikajele, wadlwengula ngoDisemba ngonyaka odlule, laba baboshwa phakathi komhlaka-14 Juni, kuya ku-16 Juni.
UKhomishana wamaPhoyisa esifundazweni uLieutenant General Mmamonnye Ngobeni uthe: "Izigwebo zithumela umlayezo oqinile kubantu abasacabanga ukwenza amacala. Kumele bazi ukuthi amaphoyisa azobafuna abathole bese begwetshwa."